IBurdock yesifo sikashukela > Ukwelashwa nokuvimbela
IBurdock yesifo sikashukela
Ucwaningo oluningi selukhombisile lokho I-burdock isitshalo esihle kakhulu sokuphilisa sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela. Ngaphezu kwalesi sifo, i-burdock isetshenziselwa izifo fungal zekhanda, iqinisa izimpande zezinwele. Amafutha avela kulesi sitshalo akhuthaza ukuphulukiswa kwamanxeba esikhumbeni, kunempahla yokuhlanza amagciwane. Ngokuhambisana nokulandelana, kukhombisa imiphumela yokulwa nokuvuvukala kanye ne-anti-allergenic. Ama-infusions avela ezimpandeni ze-burdock athuthukisa ukugaya kanye ne-metabolism, abe nomphumela we-choleretic ne-diuretic, anciphise izinhlungu, futhi asetshenziselwa izifo zomphimbo, izinsini, amazinyo, i-osteochondrosis, i-cystitis, i-dropsy, i-enterocolitis. IBurdock inempahla ebushelelezi yokuqunjelwa. Iphatha ama-cysts of kwasendaweni ahlukahlukene, ithuthukisa ukuhamba kwe-lymph Isiza ngezifo ezihlangene. Kwandisa ukufakwa kwe-glycogen esibindini. IBurdock futhi isetshenziswa njenge-prebiotic esekela ukukhula kwamagciwane asemzimbeni azuzisayo.